Interview Archives - Page2of 30 - News @ M-Media
NVC နဲ့ ပုဒ်မ-၆၅ ဆက်စပ်လာရင် နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းသွားလိမ့်မယ် (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ချို)
စက်တင်ဘာ ၁၁ ၊ ၂၀၁၆ M-Media မိုးစက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်။ . (NVC) နှင့် ပတ်သတ်ပြီး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ချိုနှင့် M-Media မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ . M-Media- အရင်ဆုံး NVC[Read More…]
September 11, 2016 — Interview
ဘာသာအလိုက် လူဦးရေစာရင်းအပေါ် မွတ်စလင်မ် ခေါင်းဆောင်များ၏ သုံးသပ်ချက် (၂)
ဇူလိုင်၂၅ ၊ ၂၀၁၆ M-Media မိုးစက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းသည်။ . ၂၀၁၄ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာဆိုင်ရာ အချက်လက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း အခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု[Read More…]
July 25, 2016 — Interview, မြန်မာသတင်း
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး၊ တူရကီသံအမတ်ကြီးတို့ နှင့် လျှပ်တပြက် အင်တာဗျူး
ဇူလိုင် ၁၀ ၊ ၂၀၁၆ M-Media မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးနှင့် တူရကီသံအမတ်ကြီးတို့ကို ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့က အခမ်းအနားတခုမှာ အမ်မီဒီယာမှ ခဏတာ အင်တာဗျူးခွင့်ရရှိရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီရယ် မှ နိုင်ငံသားများအကြား သာတူညီမျှ[Read More…]
July 10, 2016 — Interview, မြန်မာသတင်း
တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံထဲမှာကို သူက သီးခြားနိုင်ငံဖြစ်နေတယ် (အင်တာဗျူး)
“အယူအဆနဲ့ ခံယူချက်ကတော့ မပြင်နိုင်ကြသေးဘူး” တပ်မတော် အပါအဝင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအရာရှိကြီးများ သတင်းမီဒီယာအပေါ် အမြင်ပြောင်းသင့်ကြောင်း သတင်းစာဆရာရဲနိုင်မိုးက တိုက်တွန်းလိုက်သည် ထက်ခေါင်လင်း ရန်ကုန် (Myanmar Now) – တပ်မတော် အပါအဝင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအရာရှိကြီးများက သတင်းမီဒီယာအပေါ် အမြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း[Read More…]
June 30, 2016 — Interview